RetroPie: tendeuka Raspberry yako Pi ive retro-mutambo wemitambo | Mahara emahara
Kana iwe uchishuvira pamusoro pemitambo yevhidhiyo yeRetro, iwo akanakisa echinyakare asingambofa akabuda muchitaira, saka zvirokwazvo uri mukutarisa kune ese anonakidza emulators uye mapurojekiti ari kubuda akatenderedza Raspberry Pi. Imwe yeaya mapurojekiti kunakidzwa nekudzoreredza ndeye RetroPie, uye yandinoburitsa pachena makiyi ese.
Ichokwadi ndechekuti pane zvakawanda uye zvinowedzera kufarira murudzi urwu rwepurojekiti, sezvo cnharaunda yevashandisi vanofarira aya mavhidhiyo mavhidhiyo kubva pamapuratifomu apfuura hairegi kukura. Muchokwadi, kunyangwe vamwe vagadziri vakaita seSeGA kana Atari vafunga kupa mamwe emamishini avo apfuura mukana wechipiri wekusangana neichi chikumbiro chakakura ...
Iwe unogona zvakare kufarira kuziva iyo Emulators akanakisa yeRaspberry Pi, pamwe nemamwe mapurojekiti senge RecalBox y batocera. Uye zvakare mamwe magajeti evatongi kuti vagadzire ako Arcade muchina.
1 Chii chinonzi RetroPie?
1.1 Akateedzera mapuratifomu
2 Ndingaite sei kuti ndive neRetroPie?
2.1 Zvakareruka (vashandisi vevashandi)
2.2 Tsvaga maROM
3 Inowanikwa yekuwedzera-ons
Chii chinonzi RetroPie?
RetroPie chirongwa che open source yakanyatsogadzirirwa kushandura yako SBC kuita retro vhidhiyo mutambo wepakati, ndiko kuti, chaiyo retro mutambo muchina. Uye zvakare, inowirirana nemabhodhi akadai seRaspberry Pi mune ayo akasiyana maBhaibheri, asi zvakare nemamwe akafanana akafanana neODroid C1 neC2, uye kunyangwe maPC.
Sezvo iyo RetroPie 4.6 vhezheni, rutsigiro rweRaspberry Pi 4 yakaverengerwa zvakare
Iyi purojekiti inovaka pane mamwe anozivikanwa zvirongwa zviripo senge Raspbian, EmulationStation, RetroArch, Kodi nevamwe mazhinji aripo. Zvese izvi zvinounzwa pamwechete mune imwechete yepakati chirongwa kukupa iwe izere uye yakapusa chikuva kuti iwe unongonetsekana nekutamba yaunofarira Arcade mitambo.
Asi kana iwe uri mushandisi wepamberi, zvakare inosanganisira yakanaka akasiyana ekugadzirisa maturusi kuti iwe ugone kushandura uye nekugadzirisa system yacho sezvaunoda.
RetroPie inogona kutevedzera anopfuura makumi mashanu evhidhiyo mapuratifomu saka unogona kushandisa maROM emitambo yavo kuvamutsiridza nhasi. Anonyanya kuzivikanwa ndeaya:
NeoGeo Pocket Ruvara
Ndingaite sei kuti ndive neRetroPie?
Unogona kurodha RetroPie zvachose vakasununguka kubva kune yepamutemo webhusaiti yepurojekiti. Asi usati wamhanyira mairi, iwe unofanirwa kugara uchifunga kuti RetroPie inogona kushanda munzira dzinoverengeka:
Isa iyo pane iripo sisitimu yekushandisa, senge Raspbian. Mamwe mashoko e Raspan y Debian / Ubuntu.
Tanga nemufananidzo weRetroPie kubva pakutanga uye wobva wawedzera imwe software.
Kunze kweizvi kuita zvakawanda, matanho ekutevera Kuisa RetroPie kubva pakutanga pane SD zvinotevera:
Dhawunirodha mufananidzo de RetroPie inoenderana neshanduro yePi yako.
Iye zvino unofanirwa kubvisa iyo yakadzvanywa mufananidzo mu .gz. Unogona kuzviita nemirairo kubva kuLinux kana nezvirongwa zvakaita se7Zip. Mhedzisiro yacho inofanirwa kunge iri faira ine .g kuwedzera.
Wobva washandisa imwe chirongwa kuti ugone fomati iyo SD uye pfuudza iyo mufananidzo naRetroPie. Unogona kuzviita na Etcher, inoenderanawo neWindows, macOS neLinux. Iyi ndiyo nzira imwechete kune vese.
Zvino isa iyo SD kadhi mune yako Raspberry Pi uye utange.
Pane imwe yatanga, enda kumenu yekugadzirisa kune chikamu WiFi kubatanidza SBC yako kunetiweki. Gadzira yako inoenderana network adapter, nekuti iwe unogona kunge uine bhodhi rekare rine USB WiFi adapter, kana iwe unogona kunge uine Pi ine integrated integrated WiFi, kana iwe unogona kunge wakabatanidzwa neRJ-45 (Ethernet) tambo. Iwe unofanirwa kusarudza sarudzo yako uye ubatanidze kunetiweki yako yenguva dzose
Kana iwe uchida, kunyangwe zvisiri zvakafanira mune dzakawanda kesi, unogona kuisa yekuwedzera software kana mamwe emulators
Paunenge wabudirira, zvinotevera ndizvo gadzira madhairekitori ako kana vatongi vemitambo, kana uinazvo. Kuti uite izvi, matanho ndeaya:
Unganidza vatongi ve USB zvaunazvo. Kune akawanda RetroPie anoenderana macomputer paAmazon. Semuenzaniso iyo QUMOX kana the muNEXT.. Unogona kushandisa vamwe vatungamiriri vatsva.
Kana yaiswa mukati, RetroPie inofanira kungozvimisikidza iyo interface yekumisikidza ivo. Mariri, iyo inokukumbira iwe kuteedzana kwezviito mumubatsiri iwe waunofanira kutevera. Kana iwe ukakanganisa usazvidya moyo, unogona kuwana iyo menyu gare gare kuti uchinje masisitimu nekudzvanya Start kana neF4 uye kutangazve.
Mushure meizvozvo iwe zvaunogona kuita ndeizvi pfuura maROM kuve neyako mitambo yevhidhiyo yaunofarira kugadzirira kumhanya kubva kune yako Raspberry Pi. Iwe unogona kuzviita nenzira dzinoverengeka, imwe iri kuburikidza neSFTP (zvimwe zvakati omei), kuburikidza neSamba (zvakare yakati rebei), uye imwe yacho iri kuburikidza neUSB (yakapusa uye inodiwa nevazhinji). Nezve USB sarudzo:
Shandisa pendrive kana USB memory yakambomisikidzwa muFAT32 kana NTFS. Ose anoshanda.
Mukati iwe unofanirwa kugadzira iyo dhairekita inonzi «retropie» pasina makotesheni.
Iye zvino chengetedza USB nekuisa mu USB chiteshi yeRaspberry Pi. Siya iyo kusvikira iyo LED yamira kupenya.
Zvino bvisa iyo USB kubva kuPi zvakare woiisa paPC yako ku pfuura maROM mukati meiyo retropie / roms dhairekitori. Kana maROM akamanikidzwa, iwe uchafanirwa kuvasunungura iwo kuti vashande. Iwe unogona zvakare kugadzira maforodha mukati meRom kukatanura maROM nepuratifomu, semuenzaniso, unogona kugadzira dhairekita inonzi nes yemitambo yeNintendo NES, nezvimwe.
Dzorera USB zvakare muPi yako, mirira kuti LED irege kupenya.
Iye zvino zorodza EmulationStation nekusarudza Kutangazve kubva kumenu huru.
Uye ikozvino pane chete tanga mutambo… Nenzira, kubuda mutambo iwe wakanyudzwa mukati, unogona kushandisa Start uye Sarudza mabhatani akatsimbirirwa panguva imwechete pane wako mutambo mutongi uye unozodzokera kuRetroPie main menyu…
Zvakareruka (vashandisi vevashandi)
Si haudi kuomesa hupenyu hwako zvakanyanya pamwe neROM kana nekuiswa kweRetroPie, iwe unofanirwa kuziva kuti ivo vatotengesa makadhi e SD neiyi system yakaiswa, kuwedzera kune zviuru zveROM zvakatobatanidzwa ...
Semuenzaniso, mukati Amazon tengesa imwe 128GB microSD kadhi kugona kweiyo Samsung brand uye iyo yatove inosanganisira RetroPie, pamwe neinopfuura 18000 vhidhiyo yemitambo maROM akatoverengerwa.
Rangarira kuti kune akawanda mapeji ewebhu paInternet anotendera kurodha maROM zvisiri pamutemo, sezvo iri yemitambo yevhidhiyo. Naizvozvo, iwe unofanirwa kuzviita panjodzi yako wega, uchiziva kuti unogona kunge uchipara mhosva kupokana nehungwaru.
Uyezve, mukati Internet Archive iwe unogona zvakare kuwana zvekare zvekare vhidhiyo mutambo weROM. Uye zvechokwadi newewo unayo MaROM zvachose uye zviri pamutemo kana iwe uchida ivo, senge izvo zve MAMA.
Iwe unofanirwa kuziva kuti kune hombe nhamba ye Zvirongwa zve DIY kugadzira yako yakachipa uye diki Arcade muchina neiyo Raspberry Pi, pamwe nekudzokorora zvimwe zvakawanda zvinonyaradza kubva zvakapfuura nenzira yakapusa. Kune izvi, RetroPie zvakare inokupa iwe nemamwe magwaro anonakidza:
DIY yeacrylic acrylic
Asi izvo hazvisi izvo chete zvinhu zvaunazvo pamunwe wako, izvo zvakare zviripo kits dzinonakidza kwazvo kuti iwe unogona kutenga kuunganidza yako retro koni nenzira yakapusa:
GeeekPi retro console shell inotevedzera iyo SuperCOM
NESPi Iyo imwe nyaya inoteedzera ingano yeNintendo NES
Owootecc iyo GameBoy-yakafanana kesi yeRaspberry Pi Zero
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Raspberry Pi » RetroPie: shandura yako Raspberry Pi kuita muto-wekutamba muchina
millis (): zvese zvaunoda kuti uzive nezve iro basa reArduino